IINGCAMANGO EZINGAMA-30 EZIMNYAMA KUNYE EZIMHLOPHE ZOYILO LWEKHITSHI - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezingama-30 eziMnyama kunye eziMhlophe zoyilo lweKhitshi
Iingcamango ezingama-30 eziMnyama kunye eziMhlophe zoyilo lweKhitshi
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcinga zoyilo ezimnyama nezimhlophe zekhitshi ezinomxholo wangoku, wale mihla, indlu yasefama, iikhabhathi zesintu kunye nezirustic kunye nokugqitywa.
Kule mihla, unokuba nekhitshi lakho kuwo nawuphi na umbala kunye nokugqiba okunokwenzeka, kodwa kwabanye abantu, ukhetho oluninzi kakhulu lunokuba nzima. Akukho nto imbi ngokubuyela kwiziseko - kumdibaniso wakho omnyama nomhlophe. Ayisiyonto ilula kuphela, kodwa ngumdibaniso wombala ongenasiphelo, oguqukayo kwaye ngokuqinisekileyo awusoze waphuma kwisitayile. Kukhetho olusebenzayo ukuba ufuna uyilo lwakho lwekhitshi luhlale kwisitayile ixesha elide.
Umfanekiso ongasentla uyilo lwangoku lwekhitshi kunye nekhabhathi ezimnyama nezimhlophe ezigqityiweyo ezigqityiweyo kunye nezixhobo. Ukuba unekhitshi yesiko lendabuko kwaye ufuna ukuyinika uhlaziyo, ipeyinti encinci emnyama emnyama kwisiseko sesiqithi sasekhitshini inokuyinika ukujonga okwangoku. Sebenzisa izixhobo ezimnyama kwiikhabhathi zakho ezimhlophe kwaye usebenzise izibane zangoku ukukhulisa inkangeleko.
Ikhitshi elimhlophe Hardware
Ikhitshi laMnyama eliMnyama noMhlophe
Ikhitshi elimnyama kunye elimhlophe iBacksplash
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi ezineeComputer eziMnyama
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi kunye neBlack Granite
Izixhobo eziMhlophe eziMnyama zeKhitshi
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi kunye nesiQithi esiMnyama
Ukuba uneekhabhathi esele zenziwe ngomthi, kuya kuba lula ukuyipenda kwakhona ukutshatisa isikimu sombala omnyama nomhlophe. Abanye banokucinga ukuba umbala omnyama nomhlophe uyadika, kodwa ungasoloko udlala ngeetoni ezahlukeneyo (ezifudumeleyo okanye ezimhlophe ezipholileyo, njl. Njl.) Iikhabhathi ezinamanzi nazo ziza ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba, ukuze ungakhathazeki malunga nokulinganiselwa kukhetho. Nokuba mnyama uneetoni ezahlukeneyo ezikhoyo! Dlala ujikeleze ezigqityiweyo ezikhoyo kwaye uyakumangaliswa zizinto ezininzi ezahlukeneyo onokuzenza.
Ngaphandle kokudlala ujikeleze ngemibala yekhabhinethi, kukwakho nezinto ezahlukeneyo zokukhetha izinto ezikhoyo ezimnyama nomhlophe. Ukuba ufuna ukujongeka okucocekileyo okucocekileyo, okungekho porous kwaye kulula ukukugcina, cinga ukusebenzisa umphezulu oqinileyo, ngakumbi kwiibalo ezinkulu / ezinde ukuze ungakhathazeki ngamalungu. I-Quartz lukhetho olufanelekileyo, ukuba ufuna ipateni encinci, kodwa isitshixo esisezantsi kunamatye endalo. Kodwa ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olongezelelweyo, ungasoloko usiya kwigranite, imabhile, ilitye lesepha kunye namanye amatye endalo. Isiseko esahlukileyo kunye nombala wecompetop siyathandwa kwezi ntsuku- iikhabhathi ezimnyama ezinomphezulu omhlophe okanye ngokuchaseneyo. Xa ukhetha izinto eziphathekayo kwi-countertop, qwa lasela uhlahlo lwabiwo-mali, ubungakanani bekhawuntari (amatye endalo athanda ukuba nobungakanani bemilinganiselo) kunye nesimbo osifunayo. Ungalibali ukuqaphela ukhathalelo kunye nokugcinwa kwezinto ozikhethileyo ukuba ziya kuhlala ixesha elide kwaye zihlala zingenasikhunta!
isipho kumtshakazi evela kumyeni
Ukuba sele unayo iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini , enye indlela yokutsala ikhitshi elimnyama nelomhlophe kukusebenzisa izixhobo ezakhelwe ngaphakathi okanye ukusebenzisa izixhobo ezimnyama ukungafani nekhabhathi emhlophe. Isiphumo senza ukungafani okufihlakeleyo, kwaye awuyi kufuna umzamo omkhulu njengoko ukupeyinta iikhabhathi kuya kubandakanya. Uhlobo lwekhabhathi zasekhaya zasekhitshini zasekhitshini zihlala zinehardware ebonakalayo (iihenjisi kunye nokutsala). Ukuba zikwimeko entle, unokuzipeyinta ngononophelo ngombala omnyama, ukuba ukubuyisela akunakhetho. Ngaphandle kwalonto, unokufumana izixhobo zekhitshi ezimnyama, ezinje ngeesinki, iipompo kunye neentsimbi.
Apha ngezantsi kukho imizekelo embalwa yeemoyilo ezimnyama kunye ezimhlophe zoyilo lwekhitshi onokuthi uthathe inkuthazo kwiprojekthi yakho elandelayo yokuphucula ikhaya:
Ngelixa uninzi lwabantu lunee-khabhathi ezimnyama-zipeyintwe ngendlela egxininisayo, unokuba nazo iikhabhathi ezimnyama njengoko ungumbala wekhabhathi ephambili, kwaye usebenzise ezimhlophe kwisiqithi sakho sasekhitshini ngendlela yangoku. Ukuba iflat emnyama emnyama mnyama kakhulu kwizinto ozithandayo, ungaphonononga usebenzisa i-gunmetal shades, kwaye uyithambise kodwa uyidibanise ne-hardware emhlophe okanye engenasici.
Ifanitshala yentsimbi engenasici kunye nezinto zokusebenza nazo zisebenza kakuhle ngeekhabhathi ezimnyama nezimhlophe zekhitshi. Izinto ezingenazintsimbi zinika ikhitshi lakho ngakumbi kwimizi-mveliso, nokuba isitayile sekhabhathi sihle kakhulu.
Kwiikhabhathi zasekhitshini zemodyuli zanamhlanje, ezinee-matte ezimnyama eziphambili nekhabhathi ezimnyama ezifanayo, zidityaniswe nesiqithi esimhlophe esimhlophe sasekhitshini, zinika imbonakalo yeli xesha ehlaziyayo kwaye intle. Iikhabhathi eziphambili kunye nesiqithi sekhitshi sime ngokulinganayo, kwaye ukusetyenziswa kwemabhile emnyama enemigca emhlophe kunika indawo encinci kumabala e-counter.
izimvo zomtshato oluhlaza nezityheli
Unokuba nazo zonke iikhabhathi ezimnyama zekhitshi, ezidityaniswe ngetafile emhlophe yequartz. Igolide okanye ubhedu behardware bukhangeleka bukhulu ngokuchasene neekhabhathi ezimnyama, kwaye yenye indlela elungileyo yentsimbi okanye izixhobo ezimnyama.
Ezinye iikhabhathi zekhitshi zale mihla zikhetha uyilo lweeprofayile ezisezantsi, ngaphandle kokutsalwa okubonakalayo, kodwa endaweni yoko zisebenzisa i-Push ukuvula izixhobo zekhompyutha. Oku kudala ukujonga okucocekileyo ekhitshini. Kulo mzekelo iikhabhathi eziphambili zimhlophe ngezixhobo ezimnyama kunye neetafile. Oku kudityaniswe nesiqithi esimnyama esicaba sasekhitshini esigcwalisa kakuhle iikhabhathi eziphambili.
Unokudibanisa ikhabethe lakho elimnyama nomhlophe. Kumzekelo wakhe, iikhabhathi ezingaphezulu zimhlophe, ziwile ezinye zikumbala wompu. Ukudityaniswa ngehardware yentsimbi, kwenza ikhitshi elilula kodwa elinesitayile.
Bhangqa iikhabhathi ezimnyama ezicocekileyo zokubala umphezulu omhlophe ococekileyo zenza umahluko oqinisekileyo. Ukongezwa kwezixhobo zegolide kunye neeshelfu ezincinci zomthi kuthambisa ukubukeka okungaphezulu kwayo yonke into, kuyinika imeko yasekhaya ngakumbi.
Ukuba ukhetha ukuthungwa okungaphezulu, zininzi izinto onokukhetha kuzo ezenziwe ngombala omnyama / omnyama, ngelixa kugcinwa ukubonakala kokhuni lwendalo. Oku kufanelekile kwabo bakhetha ukuziva kwendalo ngakumbi ekhitshini labo.
Ukudibanisa iikhabhathi ezingaphantsi ezimhlophe ezingaphezulu kwehardware kunye neekhabhathi ezimnyama ezilaminethiweyo kwisiseko kudala ibhalansi elungileyo kweli khitshi. Imarble backsplash ikwanceda ukongeza iphethini entle kumphezulu ukunceda ukulwa ne-monotones.
Amakhaya anamhlanje ahlala enesicwangciso esivulekileyo kunye nopende omhlophe oseludongeni kuyo yonke indawo yangaphakathi, ngenxa yoko ukusebenzisa iikhabhathi ezimnyama zasekhitshini ngekhe kubenze mnyama ubume bekhitshi lakho. Zonke iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama zidibene kakuhle kunye nomgangatho oqinileyo omhlophe wokubala kunye nokubuyela umva.
Ukuba ukupeyinta iikhabhathi zakho ezimnyama okanye ukutshintsha i-countertop yakho akukho mbuzo, ungasebenzisa umnyama kwizinto zokubuyela umva. Lo mzekelo usebenzisa iithayile ezimnyama kunye ezimhlophe ezenziwe ngombala ukubanika ubomi obungakumbi kunye nemvakalo kule ndawo encinci yekhitshi.
Ukuba iipateni ezinesibindi asisiyo isitayile sakho, ungaya kwiziphumo ezifihlakeleyo ezinje ngeli khitshi elisebenzisa iithayile ezimnyama ezinamacala amnyama ukudibanisa nekhabhathi emhlophe nekhitshi emhlophe.
Ukuba uziva unesibindi ngakumbi, ungasebenzisa iipateni ezimbini ezahlukeneyo zethayile yokubuyela umva ukunika ubuntu ngakumbi kwiikhabhathi zakho ezimhlophe zasekhitshini!
Le khitshi yesitayile yakudala phantse imnyama, ngumpu umpu kunye nokuthinta okumbalwa okumhlophe ukuthambisa ukujonga konke. Iikhawuntari ezimhlophe kunye neekhabhathi ezingaphezulu zilungelelanisa iikhabhathi ezimnyama. Ithayile emnyama ebuyela umva kunye ne-grout emhlophe yenza uyilo olunomdla oluhamba ukusuka kwikhawuntari ukuya eluphahleni. Bona Okuninzi izimvo ezingwevu nezimhlophe zasekhitshini Apha.
Ukuba uziva ulinga, ungathini ngokudibanisa iithayile zepateni yesitayile setreyini ekhitshini lakho? Oku kuhamba kakuhle kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinesiteki esimnyama, kwaye uya kuqiniseka ukuba ujika iintloko. Bona Okuninzi Izimvo zetheyiphu zekhitshi ezinekhabhathi ezimhlophe Apha.
Kwiikhitshi ze-galley, ukuhamba mnyama kakhulu kuwe iikhabhathi zasekhitshini, ngakumbi ukuba sele unemigangatho emnyama, licebo elibi. Yonke ikhabethe elimhlophe lekhitshi elidityaniswe neetafile ezimnyama zegranite zibonelela ngokungafaniyo okucacileyo ngakumbi kwizithuba ezincinci.
Iifama zasekhaya zasekhitshini zihlala zineekhabhathi ezimhlophe, ke sisiseko esilula ukusisebenzisa kwikhitshi elimnyama nelimhlophe. Lo mzekelo unekhitshi elimhlophe lasekhitshini lendlu yasekhitshini nekhitshi eneentsimbi ezingenasici, ezibhangqwe ngetafile yeglasi yegranite emnyama.
Eli khitshi lanamhlanje lihamba ngendlela eyahlukileyo kumakhitshi amnyama namhlophe. Endaweni yeekhabhathi ezimnyama ezicaba, zisebenzisa iikhabhathi ezingwevu ezingwevu ezinobumba obunqamlezileyo, obumhlophe obomeleleyo, kunye nezixhobo ezimnyama matte ezimnyama zomahluko owongeziweyo.
Ngamanye amaxesha, akunyanzelekanga ukuba uphume kunye neskimu sakho esimnyama nesimhlophe. Le khitshi yesitayile yakudala yongeze kuphela into emnyama kwikhabhathi yaso enkulu yasekhitshini, ngokusebenzisa ilitye lesepha elimnyama, ukuyenza ime ngaphandle kwiikhabhathi ezimhlophe kunye neekhawuntari.
Nika iikhikhini zakho zesiko ngokwesiko lokujonga ngokutshintsha imibala yekhabinethi ukuba ibe mnyama kwaye ubeke endaweni yokubala kunye nokubuyela umva ngemarble emhlophe enemigca emnyama emnyama.
izimvo zesikhumbuzo seminyaka yokuqala zomfazi
Eli khitshi livaliweyo lidibanisa iikhabhathi ezimnyama ezisisiseko kunye neekhabhathi ezimhlophe ezingaphezulu. Indawo emhlophe eqinileyo emhlophe yayiyindawo ekhethiweyo yokusetyenziswa, ukunceda ukulinganisa iithayile zemarmarra ezisetyenziswa kwi-backsplash. Inkangeleko yonke ibotshelelwe kunye nezixhobo zegolide ezisetyenziswa rhoqo kuzo zonke iikhabhathi kunye needrowa.
Le yindlela yangoku yendlela yasekhitshini yasekhaya yasefama- isebenzisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi ezimhlophe ezibhangqwe nge-countertop emnyama kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi kwendlela yokubuyela umva. Izixhobo ezincinci ezimnyama / ukutsala kwakusetyenziselwa ukongeza inkcaza encinci, kwaye ucango olutyibilikisayo lwaluyinto entle eyongeziweyo ukugqibezela ukujonga.
Kuba eli khitshi lincinci lixinene, kusetyenziswa ii-laminates ezimnyama ezimenyezelayo kwiikhabhathi ezisisiseko, ukuyinceda ibonakalise ukukhanya kunye nokudala indawo engaphezulu. Oku kubhangqiwe ngeematte ezimhlophe ngaphezulu kweekhabhathi zohlobo olucocekileyo kunye nolungafunekiyo.
Sebenzisa izixhobo zombane ezimnyama kuzo zonke iikhabhathi ezimhlophe yenye indlela elula yokufezekisa ukubonakala okumnyama nokumhlophe. Oku kuyenzeka ngakumbi xa uthenga okanye ushenxela kwindlu engenazixhobo ezikhoyo. A Isiqithi sekhitshi esahlukileyo kunye nekhabhathi eyahlukileyo yemibala ingaba yenye indlela yokuyila yokuyila umdla othile wokubonakalayo.
mangaphi amaxesha donald ixilongo utshatile
Kuba eli likhitshi elincinci, iikhabhathi zikumhlophe matte kwaye zisebenzisa itheyibhile emnyama yomgangatho okwahlukileyo. Ubeko oluncinci lweemibono zoyilo ezimnyama nezimhlophe zekhitshi ezisebenzisa ikhabhathi emhlophe zinokunceda igumbi libonakale likhulu kwaye liqaqambile.
Ukuba unomgangatho omnyama omnyama, kucetyiswa iikhabhathi ezimhlophe. Sebenzisa izinto zokubala ezimnyama ngokwahluka kancinci. Kulo mzekelo, kusetyenziswa ilitye lesepha elimnyama, ke likhangeleka lithambile.
Ukuba uninzi lweendawo zakho kunye neekhabhinethi zimhlophe ngokucacileyo, ukusebenzisa i-countertop emnyama yamatye kuya kuba yinto efanelekileyo yokunika ubuntu obuncinci.
Lo ngomnye umzekelo wesitayile esidala kunye nekhitshi elimhlophe. Kuyilo, kuphela sisiqithi esikhulu sekhitshi esimnyama. Endaweni yepeyinti, nangona kunjalo, ibala leenkuni lalisetyenziswa, kwaye indlela yokufaka isicelo yavumela umbala wokuqala wokhuni ukuba ujonge kuwo ukuze ubanike ukuthungwa.
Kule khitshi yesitayile sendabuko, ukusetyenziswa kokugqitywa kwe-matte kwitafile emnyama kwangoko kuyinike ukuphuculwa kwale mihla. Imiphezulu yeetafile yokuthambisa matte inceda ukubopha ukujonga konke kunye. Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinemiphezulu yeetafile ezimnyama .
enkosi kumyeni nomyeni kwinkqubo yomtshato
Utata intombi yokuqala iingoma zomdaniso